DAAWO: Hooyaddii Federaalka (Puntland), ma’a ka badbaadaysaa jahawareer-ka siyaasadda!
May 23, 2020 NEWS 37
GAROOWE(P-TIMES) – Hooyadii Federaalku, waxay dhexda u taagan tahay daganaansho la’aan siyaasadeed, waa bishii 17aad ee mudo xileedka Hay’adda Fulinta oo uu aloosan yahay khilaaf u dhaxeeya labada masuul ee ugu sareeya Hay’addan Madaxweynaha Siciid Cabdullaahi Deni & Madaxweyne kuxigeen Axmed Cilmi Cismaan Karaash, isku qabadkuna wuxuu bilowday 30kii ayaamood ee u horeysay mudo xileedkooda, laakiin markale ayuu todobaadkan cirka isku shareeray.
Madaxweyne Deni, su`aal uu weydiiyey mid kamid ah xubnaha baarlamaanka, 26 October 2019-kii caro ka dhalatay awgeed ayaa kaliftay in weerar dhimasho iyo dhaawacba sababay oo ay Xukuuamddu gadaal ka riixaysay lagu qaado xarunta baarlamaanka, ka dibna xilka laga qaado Afhayeenkii baarlamaanka Cabdixakiim Max’ed Dhooba-Daareed.
Kahor intii aan Madaxtooyadu wajihin arrinta ku saabsanayd Mooshinkii Dhooba-Daareed, 21-kii October, Madaxweynuhu wuxuu wasiiro cusub ku kordhiyey golaha golaha Wasiiradda, Xildhibaan-badana la siiyey wasiiru dowlayaal iyo Agaasimayaal guud, si ay u taageeraan doonista Madaxtooyada ee baarlamaanka.
Madaxweyne Deni, wuxuu xalay magacaabay wasiiro & wasiiro kuxigeen, waxaana golaha fulinta laga qeybgaliyey labadii musharax ee uu kaguuleystay Axmed Karaash, doorashadii Puntland ee 8 Jan 2019-kii, taas oo ay dadka falanqeeya siyaasadda gobalka kusifeynayaan mid muujinaysa hardan cusub oo cabsi laga qabi karro in uu tago Hoolka baarlamaanka, haddii aan kahor xal loo helin.
WARBIXIN: Hooyadda Federaalka (Puntland), muxuu uga dhigan yahay khilaafka madaxdeeda sare, maxaa laga dhexli karaa, Baarlamaanka miyuu tagayaa, Dagaalka Argagixisada & 3 xaaladood oo Qarsoon?#WAYNAKAA
Posted by Farah Abdulkadir Geylan on Saturday, May 23, 2020
Wareegtada Madaxweynuhu, waxay golaha ka saartay qaar kamid ah saaxiibada Madaxweyne kuxigeenka, markii la ceyriyey 4 wasiir kuxigeen iyo labo wasiir oo ay saaxiib dhaw ahaayeen doodaha golaha dhexdiisa iyo saaxiibtinimada gaarka ahba, qaarkood ayaa loo arkay in ay saameyn ku yeelan karaan xiisadda Madaxweynaha & kuxigeenkiisa u dhaxaysa oo ay keeni karaan taageerayaal dhanka baarlamaanka ah, haddii loo baahdo.
Madaxweyne kuxigeenka Puntland ayaa maanta soo saaray wareegto kale, wuxuuna beeniyey in aan lagala tashan magacaabidan, ayna tahay mid waxba kama jiraan ah, oo sharciga baalmarsan, waana wareegtadii labaad 10 maalmood gudahood soo baxda.
5 mudane baarlamaan & 3da xubnood ee u sareeya guddoonka baarlamaanka Puntland ayaa ku howlanaa sidii khilaafkan xal loogu heli lahaa, inkastoo ay la kulmayeen caqabado, laakiin markale xalay ayay xaaladdu is bedeshay, markii ay soo baxday wareegtada Madaxweyne Siciid Deni oo ay 2 maalin kahor uga soo tageen in xaaladda la dajiyo, Ramadaan ka dibna la wada hadlo.
HALKAAN KA DAAWO WARBIXIN
Xubnahan waan-waanta waday qaarkood ayaa ii xaqiijiyey in ay filan-waa kunoqotay wareegtada Madaxweynaha, ayna xiliga ay soo baxday ku howlanaayeen sidii khilaafka loo dhameyn lahaa, ayna la joogeen Madaxweyne kuxigeen, laakiin ay u arkeen arrin kale oo saameyn culus reebtay.
Isimadda Puntland oo udub-dhexaad u ahaa xalinta khilaafyada & Siyaasiinta kale ee kusugan mandiqadu wali ma qaadan door dhexdhexaadin, siyaasiinta qaarkood ayaana u arka fursado siyaasadeed oo gudaha ay ka heleen.
Madaxweyne Deni & waliba saaxiibadiisa xagga siyaasadda ee loo yaqaano Aaran-jaan ayaa muujinaya tuhun ah in ay siyaasad kale lug ku leeyihiin khilaafka hadda kala dhaxeeya Madaxweyne kuxigeenka, qaarkoodna waxay wadeen todobaadkii u dambeeyey dhexgalid ku saabsan xagga barlamaanka.
Dadka la socda siyaasadda gudaha ee Puntland ayaa rumeysan in arrimaha hadda taagan, haddii aan xal loo helin ay noqon karaan kuwa waqti qaata, saameyna ay ku reebi doonaan sooyaalka Taariikhda mandiqada oo lagu yaqaan in lxaliyo tabashooyinka gudaheeda ah.
Sidaas oo kale, haddii aan khilaafkan xal deg deg ah loo helin, waxaa suuragal ah in uu sameyn ku reebo arrimaha siyaasadda oo mandiqada ka dhigo mid gudaheeda ku mashquusha, khilaafka ayaana cabsi laga qabaa in uu aado xagga baarlamaanka, haddii ay taasi dhacdana waa arrin kale oo ugub ku ah Puntland.
22 sanno, oo ay dhisneyd Puntlad, majirto dhammaan hoggaamiyayaashii soo maray kuma aysan dhiiran dhismaha Maxkamad Dastuuri ah oo qaada Khilaafyada dastuurka la xariira, maadaama labada masuul ee ugu sareeya gobalku, hadda ay isku hayaan arrimaha Dastuuriga ah, waxay sheegayaan dadka sharciga bartay in ay suuragal tahay oo kaliya in la aado xagga baarlamaanka.
Laakiin, Maxkamadda Sare ee hadda jirtaa,oo lagu eedeeyaa musuqmaasuq iyo cadaaladxumo,waxay isku aragtaa mid qaadi karta dacwaddaha la xariira arrinta Dastuuriga ah, laakiin taasi Garyaqaano badan ayaa dhaliilaya.
Wareysi uu xalay bixiyey Madaxweynaha Puntland & hadal uu jeediyey todobaadkii hore, wuxuu ku sheegay in kooxo ay kusoo duuleen Puntland, laakiin labada jeerba wuu diiday in uu cadeeyo cida ay yihiin kooxahan, laakiin xalay ayuu bayaamiyey in duulimaadyo diyaaradeed oo waday Deeq daawo ah oo loogu talogalay kahortagida cudurka #COVID19, oo laga dajiyey Badhan & Buuhoodle ay ahaayeen faragalin siyaasadeed.
Puntland, waxay dagaal kula jirtaa kooxaha Daacish & Al- Shabaab. Labaduba waxay kordhiyeen tan iyo bishii Feb ee sannadkan, weerarada ay ka geysanayaan gudaha Puntland, waxaa loo arkaa is qabqabsiga siyaasadda ah in uu Hay’addaha Amniga ka jeedinayo la dagaalankaas oo ay ku mashquulaan is-heysiga gudaha ah.
Shaki maleh in khilaafkan madaxda u sareysa uu dibu dhac ku noqonaya Puntland, oo hormuud u ahaan jirtay siyaasadda Qaran ee Soomaaliya, laakiin sannadyadii u dambeeyey hoos uga sii dhacaysa xagga siyaasadda, maadaama khilaaf dheer uu kala dhaxeeyey ilaa Xukuumaddii Shariif Sheekh Axmed ilaa tan u dambeysa ee Max’ed Cabdullaahi Farmaajo.
Adeer qoraal dheer oo macno samaynayn cidi akhrisanmsyso meesha sharci iyo nidaam ayaa yaal Madaxwaynaha Puntland xaq ayuu u leeyahay inuu magcaabo wasiiro iskuna bedelo wax u diidayana maleh. Puntland sharcigeeda ayaa marjaca ah xaal xaala mastuur ma jiro sharcigaa lagu kala bixin cid sharciga kawaynina ma jidho.
Waxaa layaableh nin hooyadii degantahay puntland hadana in nugleer bam in lagu dhifto jeclayn lahaa . markasta oo cadow isu bahaysto walks badbadaa maxaa yeelay waa dacad puntland waa joogin caada qaatena waa tegin
Dhib ma jiro ee adigu dhibka ha abuurin
PL 13kii sano ee u dambaysay waxay ka shaqaynaysay goballada Mudugh, Nugaal iyo Bari oo dadka degaa deegaandaasi isku tashi iyo horumarka deegaannadooda ku hawllanaayeen halka deegaannada SSC ay kooxo u dhashay deegaannadaasi Maamulka SNM U Gacam Haadinayeen Kuna Dhiiradeen Inay u Gacan Geliyaan deegaannadooda Maleeshiyaad Laga soo Daabulay Lughaya iyo Hargaysa kuwaasoo Waxyeello u gaysanayay Odayada Haweenka iyo Dhallinyarada Iskudayda inay ka dhiidhiyaan duullaank beeshaasi kusoo qaadady deegaannadooda… PL iyo dadkeeduba waxay rabaan inay u gudubaan doorasho qof iyo cod siyaadaeed, taasna suurtagal kama noqonayso inta 25ka Xildhibaan ee ka soo jeeda SSC ee aan tagi karin deegaan doorashadooda ay joogaan Growe….Sidaa awgeed wax macmo ah ma samaynayso in M/kuxigeenka iyo kooxaha kale ee ka soo jeeda deegaannadaasi iska tagaan, si PL u hesho Doorasho iyo dimoqraadiyad ….
Waxaan dhegaystay waraysi uu shalay BBC-Somali siiyay madaxweyne Deni. Deni wuxuu eedaymo culus dusha ka saaray Farmaajo & dawlad ku sheegtiisa. Deni wuxuu yidhi “in Badan baanu wax ixtiraamaynay afkayagana haysana laakiin hada wakhti dhow ayaan soo bandhigaynaa faragelinta sharci darada ah ee DF. Wuxuu ku daray in DF iyadoo isticmaalaya argagixisada dagaal abaabulan ku soo qaaday Puntland. Wuxuu kaloo sheegay in DFS marka beesha caalamku go,aan aanay ku farxin qaataan, inay madaafiic la dhacaan xerada Xalane!”
Deni wuxuu ku balan qaaday inuu cadaymahaas oo dhan keenayo wakhtiga ugu haboon !!!
Puntland, waa ka qiimo gadantahay karaash iyo dani, laakiin haggaanka puntland waxaa loo doortay siciid dani, ninkaan la yiraahdo Axmed karaash kursiga wuxuu ku helay gobolka sool, hal maalin ah booqasho kuma aanu tegin gobolkii, degmadii laascasno isaaq ayaa xoog ku haysta, buuhoodle kuma jirto gacanta puntland, haddaba ninkaan karaash ah maxaa lagu qadariyaa oo kursigaan uu ugu siifadhin karaa, waa wax ma tare calooshiisa oo kaliya ayuu masuul ka yahay waxbo uguma turna dadka reer sool, waana gardarro inuu dani ku qabsado shaqadiisa, baarlamaanka waa ineey codka I qaadan karaash si loo helo qof wakiil u noqonkaraa gobolka sool. Axmed karaash wuu ogyahay wixii ku dhacay dhoobo daareed meeshuu maray ayuu marayaa, arrintaasi waa isku raacsanyihiin inta difaacda då ta iyo jirtaa ka puntland, dadka qaarkiis ayaa sheega ineey puntland leeyihiin ama is-xijiyo majeerteen kkkkkkkkk waa run puntland yaan lagu qaldamin rag ciil qaba oo 21 sano kaligii taliye siyaad barre madaxa ka garaacayey ayaa ku sooqaxay xaarxaartay mustaqbalka carruurtooda iyo nagtooda ayeey ku ilaashadaan qof kaste oo isku daya inuu dhibaaterya puntland shaki kuma jiro waa ku ruuxbaxayaan, haddaba ninkaan karaash ah majeer ismaba aysan fahmin kkkkkkkkk halloosheego odayga naftaada xunta ah ilaasho hallayiraahdo
Dhinaca kale Farmaajo damaciisa fariid waa ogyahay nacasna loo sheegi maayo. Wuxuu rabaa inuu dhamaan baa,biyo baarlamanka & Maamul goboleedyada koonfur Somaaliya. Ka dib markuu koonfur Somalia, inta aan shabaab haysan, gacatiisa gasho inuu wada hadal la bilaabo Somaliland. Su, aashu waxaa weeye markaa; Ma ku guulaysanayaa arinkaa? Aniga jawaabtaydu waa maya, waa mashruuc loogu walqalay fashil. Kow, koonfur Soomaaliya kala badh waxa haysta argagixiso. Laba, Dadka ku nool koonfur Soomaaliya lama heshiisiin. Sadex, Farmaajo marka dhaqankiisa la eego maaha hogaamiye ee waxa uu u egyahay horjooge maafiya ah. kkk kkk kkk
Puntland wax layiraahdo ma aaminsani aragtideyda waxaana u dhashay goboladaa ku bahoobay magacaa qalaad.Arinta kale ee ay shacabka goboladan ay iska indha tirayaan waa xaqdarada sadbursiga, eexda cadaalad darada ka jira hadaysan meel uga soo wada jeesan oo aysan qaadan wado tan ka duwan oo ay ku kala badbaadi karaan, waxaa hubaal ah in dhiig badan uu ku daadan doono goboladan aabaha iyo hooyada u ah Qaranjabka umadda soomaaliyeed.
Laga billaabp Gaalkacyo illaa iyo Lughaye oo ah, Soomaaliya marka labo loo qeeybiyo qeyb, waa inta Soomaaliya ka badbaaday. Ciddii Soomaali ah ee in uu intaa dhib ka dhoco rabtaay. Isu diyaari in aad Dunida Falastiini Madoow ku noqoto.
Soomaaliya wixii Gaalkacyo Koofur ka xiga illaa iyo Xadka Kenya, waa Shirko oo hadda Dunida oo dhan baa wada leh. Marka, intaa hore ayaan hadda gooni u leenahay, haddii aan Soomaali nahay, ee aan ilaashano! Kkk
Anigu shacabka Puntland aad baan ugu bogaadinyaa nabada ay muda dheer ku nool yihiin. Waxaanan u rajaynayaa inay aygoo isku duuban fawaaxishta qaraxyada koonfur uga soo waariday iska qabtaan. Siyaasad waa laysku qaban Karaa laakiin in dad nool la qarxiyo waa arin macan-gegnimo ah.
A. A. Xade
Lughaye xagee kaga taal soomaliya? Oday dhulkaaga/dalkaaga nadiifso, dal aanad lahayn intaad sida maraboobta isugu dhedhe-jinayso.kkk kkk kk
Lughaye waa Soomaaliya, iyada iyo illaa Gaalkacyo laga soo gaaro waa inta hadda Ummaddii Soomaaliyeed u soo hartay, ee aay wada eeganeeyno. Intii kale waa shuraako uu xitaa Chinaha wax buu ka leeyahay.
Adigu haddii aad dal Xur ah isu taqaan, Soomaaliya Warqaddii Dalaaqdu kuma siin, Dunidina taas baay ogtahay oo Aqoonsi kama sugeeysid!!
Anigu Zoo-maal waxaan u aqaan qaxaabad aan 3 dalqo ku furay? Raqdaa Zoo-maal ayaa wax naga dhexeeyeen. Markaan Furay waxaa igu maqaalo ah inay 6 garac/maamul dhashay.kkk Hadana waxay iga rabtaa inaan meher baada siiyo. Taas bay sida bacda iiga laaladaa!kkk
Lughaya hooyadaa Zoo-maal iyo 6-da garac ee ay dhashay ma iman karaan????
Bal adaa nafka nala soo galee, wax ka guro!
kkk kkk kkk kkk kkkk kkk kkk kkk kkk kkk kkk kkk kkk kkk kkk kkk kkk kkk kkk
U jeed; Bal adaa afka nala soo galee, wax ka guro!
Waxaan kuugu daray; Ilaa qaadigu Raqdaa Zoo-maal na kala saaro, wax kasta oo aan wada lahayl waa kula leeyahay sida maalka aan guurin. Laakiin waxaas oo dhan waan kaaga tanaasulee qaado. Meher danbe hana weydiisan. Hana moodin markaan kaa tegay inaanad nin kale helayn ee ilaah aamin!kkk kkk kkk
Waxaan la yaabaa dhulbahante kkkkkkk dhulkiisii ayuu isaaq ku wareejiyey markaasuu la sootaaganyahay majeerteen dhulkiisaan wax ku leeyahay kkkkkk waa run oo niman harti ah ayaa yihiin laakiin dhulka majeerteen malihidin ee dhulkiinna isaaq ka dhacsada haddii aad caawimaad u baahataan majeerteen diyaar ayuu la yahay laakiin majeerteen garowe hakuqabsanina. Maamulka puntland dhismihiisii heshiis ayuu ahaa iskaashi iyo maamulwadssg ah laakiin dhulkii aad heshiiska kula gasheen majeerteen meeyey meel ku sheega war dhulbahantoow majeerteen ka xishoodaha wuu idinka xishoonayaaye ka xishooda majeerteen waxbo kuma iidan daran ee xishooda haddii kale sida oromada ayaa la idin tarxiili.
Faarax cilmi says:
Maxaa siyaasiyiin tu ku diideen maxkamaddii tastuuriga ahayd.
Waxaan shaki kujirin Inuusan guud ahaan dhulka soomaalida kajirin siyaasad hufan oo lamida tan ka jirta wadamada waalam ka, siyaasiyiin ta soomaalida oo marka horeba u soo gala Siyaasadda arima ay ugu wayn tahay dana dhaqaale, eex iyo naas nuujin qaraabo, Musuq maasuq kasoo bilaamay kala iib ka sayladda baarlamaan ka, Iyadoo micnihu yahay waxaad iga qaadeen shan jibaar keed, waxaan ka qaadan doonaa, shacab ka masaakiin ta ah, ee ay daashadeen, fakhri, colaad baahsan, cuduro,iyo wax barasho, la’aan
Qoraal Kay gu waxa uu u socdaa maxaa maxkamaddii dastuuriga ahayd loo dhisi la’yahay?
Jawaabtu waa maxkamaddu Waxay ilaalisaa madaxda sare Ee Dalka, oo marka khilaaf yimaado ayay sheegtaa Cidda khaldan, iyo inaysan ku celcelin khilaaf keeni kara burbur dawladeed, kaas oo aakhir kana sababi kara, colaad lagu riiqmo oo galaafta, nafta wax magarad hubaysan, oo cadiifiyi.
Marka hore Hooyadey in aad meesha keento waa aqlaaq xumo oo ninkii nin hooyadii wax ka sheego, hooyadii ayuu caay ku Casuumay, waana kaaga digayaa!!
Tankale, waan ogahay in aay badanyihiin, Ilmaha Iidoor ee uu Faysal Furwaa 30 sano beenta u sheegayey in aad tahay oo aad qiyaali ku nooshahay, anna ma doonayo in aan isku kaa daaliyo ee Qiyaaligaagu ku nooloow oo Hartiga u Dowladee!
Aniguna marka uu xaalka dalku caadi noqdo, waxaan marqaati kaaga noqon doonaa oo aanan kaa xasteyn, in aad Waa Harti Gumeeysan jirtay! Kkkk
Hooyadaa ma Zoo-maal baa magaceedu?????
Ninkan yoocada sheeganaya ma aha reer Somaliland iyo cidda aad moodeen, waa nin dhulbhante ah oo dadka isku diraya ee how jawaabin
Su,aal baan idin weydiiyay,
Somalilanders hadaan nahay anagu reer hebel idin kumala doodnee, maxaa idinka dhayda idinka lisay? Isaaaq ayaa si toosa ugu waalateen!kkk kkk kkk kkk Waar xishooda oo doodiina sare u qaada, kuwiina cuqdada Isaaq ka qabana caafimaad raadsada sala caleey!
Halkee ayaan hooyadaa ku soo qaaday kaadib yahow. Anigu Zoo-maal/aka Soomaaliya ayaan ka hadlayay. Miyaad waalan tahay? Bal umada meeshan ku jirta soo hor dhig meesha aan hooyadaa ku soo hadal qaaday? Ma helaysid munaaqyahow meel aan anigu hooyo ku caayay! Waa iga xaaraan hooya cay.Si saliima u dood nedel yahow beenaala ahi! Qoraalkayga ayaad ka ooyaysaa. Walaahi hadaan iskaa hortaago dhirbaaxo markaan kugu dhufto ayaad isku kaaji lahayd!
“Aniguna marka uu xaalka dalku caadi noqdo, waxaan marqaati kaaga noqon doonaa oo aanan kaa xasteyn, in aad Waa Harti Gumeeysan jirtay!” Ma fahmin waxaad qoraalkan ula jeedo. Miyaad carab la, dahay mise waad argagaxday!!!
Waxay u muuqata in aad yoocada khalkhal galisey.
Mar waxuu iska dhigayaa in uu reer puntland garab siinayo marna waxuu ku sheegayaa garacyo.
Cabsi xoogan ee uu farmaajo ka qabo ayaa ka muuqata.
Hada ka dib hadii farmaajo oo wata hawiye raadinayadhul ay bililiqeystaan waxaanu u furaynaa ganjeelada oo u tilmaameynaa jahada hargaysa.
Kkkkkkk ila qosol
Yoocadu sowkaa barxada ku jalaabuteeyay ee A. A. Xade afkii juuqda gabey maaha.
Waa dhab oo Habartii Soomaaliya imika Shanbey dhashey midna weli wey sidaa oo lama garanayo raq iyo nolol wuxuu ku sugan yahay oo waa Banaadir. Kkkk
Somaliland hadey habartaas 29 sano horteed furtey waxan oo garac ah yaa ka dhalay tollow?
Kaaga darane habartu waxey ka lixaad la dhali la’dahay maaha ku raagis uu ku raagey we shantii kale ayay rabtaa iney halkay kasoo yaacisay ku celiso. Kkkkkkkkk
Shaqadaas dhibta badana Farmaajo ayaa GLOVES waaweyn iyo face mask u dhixey. Inteynu hubno waxa uu tunka/surka soo qabtey 3 oo Habarta hor kambadhuudha/kadalooba. Kkkk Labadii kalena followgeeda ayuu hayaa oo Jubaland baa ka fakfakaneysa imika, Puntland waxey kala garan la dahay iney tahay Hooyadii oo iyada lagu xareyn doono inta kale iyo iney noqondoonto ta ugu danbeysay ee meesha lagu gufeyn doono. Kkkkkkkkkkkkkk
Puntland waxay bartamaha uga dhex jirtaa khataro badan. Dhinaca waqooyi waxaa ka xiga maamul Direed marna Irir ah oo hadafkooda koowaad uu yahay in ay saaxadda geeska afrika ka tirtiraan Daarood isla markaana waxay ku guuleysteyn in cadaawad iyo naceeb dhex dhigaan beelaha Harti Daarood qaarna ay kaxayseyn.
Dhinaca Koonfurta Puntland waxaa ka dhisan maamul Hawiye ku dhan yahay ujeedkooda koowaadna uu yahay in ay qabsadaan qaybo ka mid ah dhulka Puntland.
Buuraleyda Galgala waxaa ku jira ururi Argagixo Caalami ah oo dagaal xoog leh kula jira Puntland.
Jabuuti wax wanaag ah uma heyso Puntland iyo Daaroodka.
Itoobiyada hore midda cusub Puntland kuma lahan kalaakal wanaagsan sida Dirta Waqooyi ugu leedahay Itoobiya.
Dadka waxay isweydiiyaan sababta Alshabaab qaraxyo iyo dilal uga sameynweydey Hargeysa, wax kale ma ahan ee sirdoonka Itoobiya baa si wacan uga u ilaaliya dhulkaas.
Sidee beey Puntland uga badbaadikartaa waxaas khataro ah ???????????
Dhulbahantuhu miyaanu Reer Somaliland aheyn? Kkkk
Waa gabadh,aan ka xishoon,raga. War orod oo la tali kuwa,aad isko degaanka tihiin,waa deegaanada,Hargaysa,Burco ,Berbera,
Gobolada Soomaaliyeed,ee Awadal,Sool,Sanaag intasi waxa ay,kal iyo laaba,ka yihiin Soomaaliya.
Geelle cudur dhulbahante ayaa kugu dhacay is dawee wll. Hadaad doonayso inaad waxnaga sheegto noo soo badheedh lkn ninka iidoor ee yoocada magaca ka dhigtay dusha hanaga saarin tolkana ma cayno ee anagu xabadaanu ridnaa, arintaa ka soco, dhawaaqana dhegayso
Ali waxaan leeyahay indr cayda naga daa oo wax noolla hadh dhulbahante waa dad badan oo shiikh iyo shariifba leh, waxyaalaha qaladka ahna laguma wada socdo, sida majeerteenba nin sax ah iyo nin qaldanba u leeyahay. Markaa wax halayskula hadho oo yaan la fududaan labada dhinacba.
Kkkk saxiib sida saansaantu ku socoto waxay u muuqata in habartu dhali doonto garacii lixaad. Wararka hoose waxay timaamayaan in muuse biixi mar aan fogeyn dhalan doono. Gix gix gix
Reer awowgey Siciid Harti AKA Dulos waa geesiyaal taarikhdu xustay. Anigu 80% waxaan wataa DNA’da Dulos. Sababtoo ah 3 farfan ee ah dhanka aabahay waxaa dhalay ayeeyooyinkay dhulos. Dhanka hooyaday’na waxaan ku leeyahay 2 farcan ayeeyo ee ah Dhulos. Sas baan ku noqday 80% dhulos. Deeniwow is jir. Eid Mubarak dhamaantiin.
EID MUBAARAK BAHDA PL-TIMES IYO AKHRISTAYAASHEEDA SHARAFTA BADAN IYO KULI SOOMAALI
Karaash oo Waraysi siiyay BBC Somali ayaa kashifay inaanay jirin wax wada-shaqayn ah intay xilka hayeen isaga iyo Deni,uuna jiray khilaafka hadda dibeda usoo baxay.
Karaash wuxu kaloo kashifay beenta Deni Ku xusay wareegtadiisa,kuna sheegay inuu Karaash kala tashaday magacaabidda xubnihii uu magacaabay,wuxuna sheegay siday suurtogal u tahay inay wada-tashi iyo hadal yeeshaan laba qof oo salaanta Islaamka aan iska qaadin?!!!!!!
Wuxu kaloo sheegay in Deni marar badan ku yidhi: “ADEER MEESHA ANAA KA TALIYA” marku kala hadlay awood maroorsiga,la tashi la’aanta uu wado!!!
Khilaafku wuu sii cakirmayaa,waana cadyahay inaan meesha loo sinayn,Denina sidii caadadiisu ahayd wuxu Ku fekerayaa inuu Baarlamaanka laaluusho,si ay Karaash uga keenaan mooshin,loona doorto mid halkii loo jeediyuun u jeesta.
Haday arintaasu timaado Dhulbahante ha ka tashadaan Puntland,yaanayna yeelin quudhsi iyo in nin rageedkooda inta la bahdilo mid liita lagu bedelo sida Warsangeli.
Adeer Karaash waan kula jirnaa,haday kaliftona waynu ka tashan Puntland.
Garabkaagaanu taaganahay ee meel saar Deni Zanzibar.
Ka dar oo dibi dhal. Ninbaa laga hayaa anoo Aabahay la yaaban ayuu Aabahayna Aabihiis ii keenay! Kkkkk
Anagoo shantaas garac ee dhakofaarsan la yaaban iyo kan lixaad ee ayka sidato uun ee ‘ma’iska Kay dhashidooda’ kasoo dhex leh meesha, ayaad adna nagu leedahay idinkoo soo jeeda ayaa la’idin dhalayaa! YAABKA YAABKIIS!!!
Sxb Habartu sideebey u dhali kartaa odeygii iyada Furey?
Habartu indho sarcaad sidiisii ah ayay rabtaa iney noo jisho. Digaagadaha ayaa xamaantooda oo dhan baalasha ku xareysa. Kolkaas Habartu waxey damacsan tahay iney iskaga kaaya dhigto carmal/garoob imikuun la dalaaqay. Xaaji sadexdii bilood ee shareecadu dhigtey aan sugney leedahay. Intey Shanta gowseystay dib iskugu juqaasho ayay rabtaa iney na marsiiso, ‘adaan ku qaadey’. Dabadeedna dib usoo yaaciso qaar ay qeybi qaangaadheen oo xitaa qayila. Kkkkkkk Eeyaa Aabooy Boowe, sow aabahay matihid baa ka dhici doonta. Kkkk
Aar sxb 29 sano dabadeed sheekadaasi ma soconeyasee ama Habartu caruurta ha iska korsato ama dib ha iskugu uruuriso amaba ha cunto. Iyadey jirtaa.
Intaas wixii soo raacaa waa cirka ha’u taleedhiso. Kkkkkkkk
Ninba wuxuu ku ciil bixi karaa kuu cawo aduun
Adeer meesha (Madaxtooyada) wiil buu keensaday (Deni),anna midbaan keensaday hadaan Karaash ahay,kaygii ayuu eryay,kiisiina waa joogaa,marka meeshu isku hallayn maleh
Waxa la moodaa meherad ganacsi laba nin ku shuraakoobeen,shaqaalahana si siman u qaybsadeen!!!!
Karaash waxa runta ayuu taabtay iyo waxay isku hayaan inay tahay dano gaar ah oo labadooda Ku kooban, jirin dan Puntland oo laysku hayaa.
Waa xiniinyo taabasho in lagugu xurmeyn waayo shaqaalaha aad meesha keento.
Deniyow faraha ka qaad shaqaalaha Karaash iyo xubnaha uu keensado adba qaraabadaada iyo xulufadaadu waa lama taabtaanee,hadii aad diido adaa cirka roob Ku og.
Saxiib habartu tii aad ogeyd ma aha.
Intii la yasayey oo la oran jirey garac aruursato ayey hoosta iska dhisaysey oo jaamacado kasoo baxaday oo ku takhasustay cilmiga “rimi gacmeedka”
Marka saaxiib ha yareysan habartu in ay garacii lixaad dhalayso.
Miyaadan maqal in habartu ay hada ku mashquulsantahay in sadex ka mid ah garacyadeeda ay u qorsheynayso in ay dhulka uga soo bixiso subaga madow. Waa sadexda garac ee baa’riga u ah.
Garaceedii curadka u ahaa wey darisay oo geela banaakiisa ayuu taagan yahay.
Garaca lixaad ee ay hada u goodinayso waa in uu dhashaa waayo fursad kale uma banaana.
Wadaad baa laga xigtay in uu yiri, marki cadaabta lagu dhex arkay
“fiqi tolkiis kama jana tago”.
Waxaa hubaal ah, markii subaga madow habartu ay dhulka ka soo saarto, in qaraca lixaad uusan tolkiis ka jana tagahayn.
Garac lixaad waa guri u dambeeysa oo laga yaabee in ay habartu jeclaato oo koolkooliso.
Wale deni waa nacas dumarka dhaama majertenia waxan idin leeyahay tariikhda idin xusi doonta dhulbahante iyo warsangalj waxan leeyahay waa ka caqliga majeerten ka tashada ama somaliland ku biira oo ila yoocada so qabta galmudugna way dhisantay gaalkacayo iyana ha qabsadeen majeertenia way iskh filan yihin